आइजीपी सर्बेन्द्र खनालले गरे इतिहास नै रच्ने नमुना कार्य हेर्नुस » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आइजीपी सर्बेन्द्र खनालले गरे इतिहास नै रच्ने नमुना कार्य हेर्नुस
शनिबार, बैशाख ८, २०७५ २०:१७ मा प्रकाशित !
काठमाण्डौ – नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले धमेकादार शुरुवात गरेका छन । उनले तीन आईजीपीले गर्न नसकेको सईबाट ईन्सपेक्टरको बढुवा एक सातामै टुंग्याएका छन । शुक्रबार २०५८ र २०६० मा सई बढुवा भएका ७३ जना सई ईन्सपेक्टरमा बढुवा भएका छन । कुवेरसिह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्यालको पालामा सईबाट ईन्सपेक्टरको आन्तरिक बढुवा जाममा परेको थियो ।
२०६० सालमा सइमा बढुवा भएकाहरुको बढुवा निकालिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। १ हजार ६१ जनामध्ये उत्कृष्ट ७३ जनालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको उच्च प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो । राजेन्द्र थापा, भुवनबाबु खड्का, अमृत बस्नेत, रेशम आर्चाय लगायतका सईहरु बढुवा सिफारिस समितिमा परेका छन् ।
बढुवा सिफारिस समितिले आजै जवानबाट हवल्दारका लागि ४०० जनाको नाम टुंगो लगाएको छ । केही दिनभित्रै इन्सपेक्टरबाट डिएसपीको पनि बढुवा हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्वेन्द्र खनाल आइजिपीमा नियुक्त भएपछि उनले तल्लो दर्जाको बढुवा जाम खुलाएका हुन् । खनालले सबैभन्दा बढी योजना चाहिने भनेकै प्रहरी जवान र हबल्दार लागि हो, भनेका छन् । नेतृत्व तहमा रहेर माथिमाथिको मात्र नहेरी तल काम गर्ने ती प्रहरीमा केन्द्रित रहने खनालले बताएका छन् ।
बुट बजारेर परिवार नभनि दिनरात खट्ने समूह प्रहरीमा ठूलो भएको भन्दै खनालले त्यसलाई मुटुमा राखेर काम गर्ने बताएका छन् । सई बढुवा भएपछि प्रहरीमा खुसियाली छाएको छ । सइबाट ईन्सपेक्टरमा बढुवा भएका हरुको सूची निम्न छ ।
PREVIOUS POST Previous post: राति ११ बजेसम्म पर्यटक हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने
NEXT POST Next post: पेस्तोलसहित एक युवक ठमेलबाट पक्राउ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, बैशाख ८, २०७५ २०:१७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, बैशाख ८, २०७५ २०:१७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, बैशाख ८, २०७५ २०:१७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, बैशाख ८, २०७५ २०:१७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, बैशाख ८, २०७५ २०:१७